Ambolimadinika – Nosiarina: Nofatoran’ny Fokonolona tady ilay Sefo Fokontany
mercredi, 05 juin 2019 09:53
Nigadona vao mangiran-dratsy tao amin'ny Fokontany Ambolimadinika, Kaominina Nosiarina, Distrikan’i Sambava, omaly talata 4 jona 2019, ny Zandary niaraka tamin'ny mpandraharaha iray nitondra azy ireo handeha hisambotra tanora iray izay voalaza fa mipetraka ao amina Katekista amin’ny Fiangonana iray tao an-tanàna, noho izy io nisy nitory amin'ny raharaha ady tany.
Rehefa tsy hita tao ny notadiavina, ary tsy nilaza izay toerana misy io tovolahy io ilay Katekista dia nentina haingana ho any amin'ny biraon’ny Zandarimaria Sambava.
Vao naheno izany ny Fokonolona dia nirohotra nankany amin'ny Sefo Fokontany ao an-toerana izay tondroin'ny vahoaka fa izy no ao ambadika miara-miasa amin'ity mpandraharaha mitondra ireo mpitandro filaminana hisambotra olona ireo, ary ny Katekista izay “tsy manan-tsiny”, hoy ny Fokonolona, lasa nentina any amin'ny birao.
Nosamborin’ny Fokonolona ary nofatoran’izy ireo tady ilay Sefo Fokontany. Niditra an-tsehatra ireo Polisy manao “Police de la route” teo an-toerana nampaniraka fiara haka haingana ilay Sefo Fokontany hiala, hisorohana ny hatezeram-bahoaka.
Nitady ny toerana mety nitazomana ilay Sefo Fokontany ny Fokonolona efa nentin-katezerana ary nitaky ny hanolorana azy amin’izy ireo.
Tonga ny avy amin'ny fiadidiana ny tanànan’i Nosiarina tamin’ny misandratr’andro nampitony ny Fokonolona ary nilaza fa hanao tatitra amin'ny ambaratongam-pitondrana mba handaminana ny raharaha. Nanolo-kevitra ny avy amin’ny Kaominina ny hanoloana haingana ny Sefo Fokontany izay voatondro fa fototry ny savorovoro omaly io.
Navotsotra ilay Katekista, taorian’izay ; mbola karohina kosa ilay tovolahy.